चीन पीओई छाता, उल्टा छाता, सुपर मिनी छाता - फेन्जीयुआन छाता
हाम्रो कारखानाले POE छाता, रिभर्स छाता, सुपर मिनी छाता प्रदान गर्दछ। जीवनको सबै क्षेत्रका मानिसहरुको बलियो सहयोगका लागि धन्यवाद, कम्पनीले देश र विदेशका महत्वपूर्ण ग्राहकहरु संग राम्रो सहकारी सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। हामी उच्च गुणवत्ता, उचित मूल्य र उत्तम सेवा लिन्छौं। हामी kind० भन्दा बढी देशहरू र क्षेत्रहरूमा आधारभुत प्रकारको र फेसनशील छाता र सनशाडहरू आपूर्ति गर्दछौं।
6K कम्प्याक्ट सुपर मिनी3सेक्शन वर्षा छाता
कुनै पनि सुरक्षा दिनुहोस्: २१० ग्राम भन्दा कम तौलका, हाम्रा साना छाताहरू निश्चित गर्छन् जब कि तूफानले हिर्काउँदा सधै तयार हुन्छौ! पोर्टेबिलिटीका लागि डिजाइन गरिएको, लेपित पोलिस्टर फेब्रिकले पानीलाई रिपेल गर्दछ, तपाईंलाई सुख्खा राख्छ र वर्षा, स्लीट र हिउँबाट बचाउँछ। निलो रंग। हामीबाट K के कम्प्याक्ट सुपर मिनी section सेक्शन वर्षा छाता किन्नको लागि स्वागत छ।
24K वयस्क स्टिक ईवा ह्यान्डल छाता
२K के वयस्क स्टिक ईवा ह्यान्डल छाता गल्फर्सका लागि एक आदर्श साथी हो र पदोन्नतिको लागि राम्रो छ, व्यावासायिक वा दैनिक जीवनको लागि। यसको पातलो संयोजन विभिन्न रंग डिजाइन, आरामदायक काठको पकड, कडा फ्रेम र स्वत: खुला संयन्त्र संग, G4Free परम गल्फ छाता एक महानगर शहर वा खेल मैदान मा एकदम सही छ!
विशेष लामो वयस्क स्टिक छाता वर्ग आकार
विशेष लामो वयस्क स्टिक छाता वर्ग आकार गोल्फरहरूको लागि एक आदर्श साथी हो र पदोन्नतिको लागि राम्रो छ, व्यावासायिक वा दैनिक जीवनको लागि। यसको पातलो संयोजन विभिन्न रंग डिजाइन, आरामदायक crook पकड, मजबूत फ्रेम र स्वत: खुले संयन्त्र संग, G4Free परम गल्फ छाता एक महानगर शहर वा खेल मैदान मा एकदम सही छ!
काठ कोमल क्लासिक वयस्क स्टिक छाता
काठ कोमल क्लासिक वयस्क स्टिक छाता गोल्फहरूको लागि एक राम्रो साथी हो र पदोन्नतिको लागि राम्रो छ, व्यावसायिक व्यवसायिक वा दैनिक जीवनको लागि। यसको पातलो संयोजन विभिन्न रंग डिजाइन, आरामदायक काठको पकड, कडा फ्रेम र स्वत: खुला संयन्त्र संग, G4Free परम गल्फ छाता एक महानगर शहर वा खेल मैदान मा एकदम सही छ!
डबल लेयर विशेष वयस्क स्टिक छाता गोल्फरहरूको लागि एक आदर्श साथी हो र पदोन्नतिको लागि राम्रो छ, व्यावासायिक वा दैनिक जीवनको लागि। यसको पातलो संयोजन विभिन्न रंग डिजाइन, आरामदायक crook पकड, मजबूत फ्रेम र स्वत: खुले संयन्त्र संग, G4Free परम गल्फ छाता एक महानगर शहर वा खेल मैदान मा एकदम सही छ!
विशेष इन्द्रेणी एज लामो वयस्क स्टिक छाता
विशेष इन्द्रेणी किनारा लामो वयस्क स्टिक छाता गोल्फहरूको लागि एक उत्कृष्ट साथी हो र पदोन्नति, व्यावासायिक वा दैनिक जीवनको लागि राम्रो हो। यसको पातलो संयोजन विभिन्न रंग डिजाइन, आरामदायक crook पकड, मजबूत फ्रेम र स्वत: खुले संयन्त्र संग, G4Free परम गल्फ छाता एक महानगर शहर वा खेल मैदान मा एकदम सही छ!